Fampandrosoana ny kanto : «aoka hisy ny fizarana asa », hoy i Hanitra | NewsMada
Fampandrosoana ny kanto : «aoka hisy ny fizarana asa », hoy i Hanitra
Mpanakanto anisan’ny manana traikefa matanjaka eo amin’ny tontolon’ny fampandrosoana ny kolontsina i Hanitra Rasoanaivo. Tsy eto an-toerana ihany fa hatrany ivelany ihany koa. Maneho ny heviny izy.
« Ny antsika, sady mpanakanto no mpamorona, no mpikarakara fampisehoana, sns ! Antony iray tsy mampandroso ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy ny tahaka izany », hoy i Hanitra Rasoanaivo. Nanteriny fa « aoka hisy ny fizarana asa raha te hampandroso sy hampivelatra marina ny zavakanto sy ny kolontsaina malagasy ».
Tombontsoa lehibe no azo raha ny fanazavany hatrany satria, tsara lamina sy mirindra ny zava-drehetra. « Tsy mety ilay sady mifofotra no mively vy fa tokony ho samy mandray andraikitra manandrify azy », hoy i Hanitra.
Noraisiny ho ohatra tamin’izany ny olona miara-miasa aminy, amin’ny fanatanterahana hetsika na fampisehoana iray. Fantatra fa mahatratra 93 izy ireo. « Miteraka asa, mampiditra vola vahiny, sns, izy ireny », hoy hatrany i Hanitra Rasoanaivo.
Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa ny any ivelany indray no manana tahiry maro isan-karazany momba an’i Madagasikara raha oharina amin’ny eto an-toerana, raha ny fanazavan’ity mpanakanto manana ny maha izy azy ity. Nanamafy izany rahateo ireo rehetra nandaha-teny nandritra ny hetsika « Valiha mitety vazantany » notanterahina tao amin’ny Alliance française Andavamamba.